Uhlalutyo lwe-Sonos Arc, eyona bar yesandi igqwesileyo kwintengiso | IPhone iindaba
Uhlalutyo lwe-Sonos Arc, eyona bar yesandi igcweleyo kwintengiso
ULuis Padilla | 10/05/2021 14:51 | I-Apple tv, Ezahlukeneyo
I-Sonos ibeke ibha ephezulu kakhulu kunye ne-Sonos Arc yayo, ibha yesandi eyilelwe ukusinika esona sandi silungileyo, iDolby Atmos, ekufuneka sidibanise kuyo ezinye izinto ezininzi uyibeke ngaphandle kwamathandabuzo njengeyona ndawo yesandi ipheleleyo kwintengiso.
1 Ukucaciswa kunye noyilo
2 Unxibelelwano lweTV
3 Isandi seCinema ekhayeni lakho
4 IAmazon Alexa, uMncedisi kaGoogle kunye nokudlala i2
5 Umculo kwi-Sonos Arc yakho
Ukucaciswa kunye noyilo
Le bar yesandi inemilinganiselo emikhulu, kwi-114cm ubude, eyenza ikulungele ukuma phambi kwethelevishini ezinkulu. Ingabekwa phantsi komabonwakude, ixhaswe etafileni, okanye ixhonywe eludongeni, ekuya kufuneka uyithenge inkxaso eyongezelelweyo engafakwanga ebhokisini. Inezithethi ezili-11 zizonke (ii-tweeters ezi-3, ii-woofers ezi-8) kunye nee-amplifiers zeklasi eziyi-11. Ezi zithethi zijolise ekucingeni ngokuvelisa esona sandi sihle seDolby Atmos. Ayisiyo ibar yesandi "efanisayo" okanye uhlaziyo lwesoftware olunike iDolby Atmos, kodwa yenzelwe yona ngokukodwa.
Ngokunxibelelana, ine-ethernet kunye nonxibelelwano lweWiFi (802.11b / g), ukongeza kwi uqhagamshelo olunye lwe-HDMI 2.0 ehambelana ne-ARC kunye ne-eARC (Siza kuthetha ngonxibelelwano lwayo kwiTV kamva). Ukuba ufuna ukusebenzisa ikhebula elibonakalayo ukudibanisa isandi, akukho ngxaki, njengoko iadaptha ibandakanyiwe ebhokisini, kodwa uya kuphulukana nesandi seDolby Atmos. Iimakrofoni zayo ezine zikuvumela ukuba uyinike imiyalelo yelizwi yokusebenzisa abo bancedisi banokufakwa: uMncedisi kaGoogle kunye neAlexa. Ngaphandle kweDolby Atmos, ikwaxhasa iDolby TrueHD kunye nezinye iifomathi eziqhelekileyo.
Uyilo lwayo luphawu oluphambili lwendlu, ene-grille egobile egubungela wonke umphezulu weSonos Arc, ogqitywe yimingxunya engaphezulu kwama-75.000 kunye nelogo yeSonos kuphela eyaphula ukufana kobuso bangaphambili. Ingqondo, intle kwaye ayinasiphelo, njengazo zonke iimveliso zikaSonos. Ukongeza kwisithethi esimnyama esinokubona kolu hlalutyo, sikwanokukhetha ukuyithenga ngombala omhlophe. Ezantsi, iinyawo ezimbini ze-silicone zivumela ukubambelela kakuhle etafileni, kwaye kuthintele ukungcangcazela, kubalulekile kolu hlobo lwesixhobo.
Ine-LED encinci ngaphezulu kwelogo ye-Sonos, ebonisa imeko yoqhakamshelwano, xa sibiza umncedisi obonakalayo, okanye xa sithule ibar yesandi. Sineeqhosha ezintathu zokuchukumisa ukulawula ivolumu kunye nokudlala kwakhona. Inayo neqhosha lokuchukumisa kwicala lasekunene ukuze ungasebenzi umncedisi obonakalayo, ohamba kunye ne-LED ukuze azi ubume bayo. Unxibelelwano lungemva, ecaleni kweqhosha lamandla. Iinkcukacha ezibalulekileyo: Intambo ye-HDMI ibandakanyiwe ebhokisini, into engaqhelekanga kakhulu.
Ibha yeSonos Arc iqhagamshela kwiTV isebenzisa intambo ye-HDMI, ekufuneka iye kunxibelelwano lwe-HDMI ARC / eARC kwiTV yakho. Oko kuthetha ukuba awuzokwazi ukudibanisa naziphi na izixhobo ngokuthe ngqo kwi-bar, kodwa endaweni yoko sonke isandi esiphuma kwi-TV yakho siya kwi-Sonos Arc. Oku kunezibonelelo kunye nokungalunganga, nangona kwimeko yam ndizichaza ngakumbi ngokuxhasa amanqaku amahle kolu khetho. Esona sizathu siphambili kukuba ungakhathazeki malunga nokuzaliswa kwakhona kwiTV yakho, awuyi kufuna iihabhu okanye ezinye izixhobo kuba uphelelwe lunxibelelwano oluhambelanayo. Unokumamela umxholo we-DTT ngayo.
Kodwa kukwathetha ukuba umabonwakude wakho kuya kufuneka abe ngokwangoku ukuze akwazi ukuyisebenzisa. I-HDMI i-ARC ayisiyongxaki, kuba uninzi lwethelevishini luyayifaka, kodwa i-HDMI eARC yiyo, engekabikho unxibelelwano olubanzi kakhulu. Nge-HDMI ARC unokuva isandi esigqwesileyo, kodwa hayi i-100% yokwenene iDolby Atmos, yinto esondele kakhulu evakala ilungile, kodwa ingeyiyo eyokwenyani. Nge-HDMI i-eARC ungasonwabela esona sandi silungileyo sinokusinikwa nguSonos Arc. Qiniseka ukuba uhlobo loqhagamshelo olubandakanya umabonwakude wakho ukuze wazi ukuba ngowuphi umgangatho wesandi onokufikelela kuwo.
Ngokuphathelene nolawulo lwebha yesandi, ungasebenzisa ulawulo olukude kumabonwakude wakho, kunye nokude kweSiri kwi-Apple TV yakho. Awunakwenza nto, akukho mfuneko yokuba uqwalasele nantoni na, kuya kufuneka uqhagamshele i-Sonos Arc kumabonakude wakho, kwaye uthathe irimothi oyisebenzisa rhoqo ukuze ukwazi ukuphakamisa kunye nokuhlisa umthamo webar yesandi. Kukho ukulibaziseka okuncinci kweeshumi ezimbalwa zomzuzwana, into eyi-anecdotal engatshintshi amava amnandi okusebenzisa oku kuluncedo kumabonakude wakho.
Isandi seCinema ekhayeni lakho
Umgangatho wesandi se-Sonos Arc ungaphaya kombuzo, njengoko kufanelekile kwibar yesandi ephezulu. Uyakonwabela zonke iinkcukacha zesandi seemovie zakho kunye nothotho, ngeebhasi ezintle kakhulu kunye namazwi onokuwava ngokucacileyo nakwindawo ezivakala kakhulu. Le yinto ebonakalayo kwezinye izixhobo ezifikelelekayo, nokuba unokukhetha ukusebenzisa ii-HomePods ezimbini ezinxulunyaniswe ne-Apple TV yakho.. Isandi esijikelezileyo osifumana kuphela ngeSonos Arc silungile ngenene, siyinto ebalaseleyo kwabo bangafuniyo ukugcwalisa igumbi labo lokuhlala ngezithethi.
Ukusuka kwisicelo seSonos kwi-iPhone yethu sinokusebenzisa ezinye iindlela zokuphucula isandi, okanye mandithi, silungelelanise imeko nganye. I-Sonos Arc ine-TruePlay, ukhetho oluguqula isandi kwigumbi onombulelo kulo usebenzisa imakrofoni ye-iPhone yakho. Kodwa kwakhona Unokwenza izinto ezimbini ezinomdla ezinje ngemowudi yasebusuku kunye nencoko eziphuculweyo. Eyokuqala yokunciphisa izandi ngaphandle kokuthoba isandi, kwaye okwesibini yenze ukuba incoko icace gca, ilungele imiboniso bhanyabhanya.
Ukumodareyitha kunye nokwanda kwenkqubo yesandi sakho yinto ebonakala kuSonos, kwaye ngale Sonos Arc ihlala iyindawo ebalulekileyo yokuthandwa. Ngokwayo isinika isandi esimangalisayo, kodwa ukuba uyafuna ungongeza iisathelayithi ezimbini ukubeka ecaleni kwesofa, njenge-Sonos One, okanye ukongeza i-bass amplifier, njenge-Sonos Sub, ukwenza amava esandi nangcono. Kwaye konke oku ngaphandle kwentambo, ngokucinezela iimenyu ezimbalwa kwisicelo sakho seSonos.
IAmazon Alexa, uMncedisi kaGoogle kunye nokudlala i2
Ukongeza ekusetyenzisweni kwayo njengebha yesandi, sinezinye iindlela ezonyusa ixabiso lesi sixhobo. Singafakela abancedisi ababonakalayo kuGoogle okanye kwiAmazon, ukuze sibe nesithethi esihlakaniphileyo kwigumbi lokuhlala. Yintoni onokuyenza ngaba bancedisi? Ewe, into efanayo oyenzayo ngayo nasiphi na isithethi esiqhelekileyo esihlakaniphile: mamela umculo kwinkonzo yakho yokusasaza, lawula i-automation yasekhaya, mamela i-podcast okanye i-rediyo ngqo, cela ulwazi malunga nento oyifunayo ... Kwaye, vula i-TV yakho okanye cima, kwaye ulawule ivolumu.
Kwaye uSiri? Ewe, uSiri akanakufakwa kule Sonos Arc, kodwa Ewe ungathumela umxholo wombulelo kukuhambelana kwe-AirPlay 2. Oku kuthetha ukuba le bar yesandi iya kubandakanywa kwisicelo sakho seKhaya, kwaye ungasebenzisa iSiri nakwesiphi na isixhobo esinayo (i-iPhone, i-iPad, iPodPod…) ukuthumela isandi kwi-Sonos Arc. Ungasebenzisa i-multiroom, okanye uyiqokelele kunye nezinye izithethi ze-AirPlay ezinomculo ohambelana ngokugqibeleleyo kuzo zonke.
Umculo kwi-Sonos Arc yakho
Ngale ndlela uSonos Arc Ayisetyenziselwa ukumamela umxholo weTV yakho kuphela, kodwa ikwayiyo nokumamela umculo ukusebenzisa nayiphi na inkonzo oyisebenzisayo. I-Apple Music, enkosi kwinto yokuba ibandakanyiwe kwiAmazon Alexa okanye ngeAirPlay 2, Spotify okanye nayiphi na inkonzo yomculo eshukumayo ebandakanyiweyo kwiNkqubo ye-Sonos kwaye unokulawula kwisicelo uqobo.
Umgangatho womculo ngeSonos Arc ubalasele, nangona kungenzeki umahluko omkhulu nezinye izithethi eziphezulu njengokumamela imovie okanye uthotho. IiPodPods ezimbini zestereo zinokubonelela ngesandi esifana kakhulu nale Sonos Arc, engeyonto imbi, eyahlukileyo.. I-Sonos Arc isebenza ngokugqibeleleyo xa kufikwa kumdlalo bhanyabhanya, kwaye ibalasele xa kufikwa kumculo.
NgeDolby Atmos, ukuhambelana kwe-AirPlay 2, ukubanakho kokusebenzisa i-Alexa okanye uMncedisi kaGoogle, kunye nobuchule kunye nokwandiswa okunikezelwa nguSonos kwizithethi zayo, le Sonos Arc ngaphandle kwamathandabuzo yeyona bar yesandi igqibeleleyo nenomdla onokuyifumana. kwimarike. Ixabiso layo linokubonakala ngathi liphezulu, kodwa ukuba siyayithelekisa nezinye izandi ezinikezela ngeDolby Atmos, iya kubonakala ngathi yexabiso eliphantsi kuthi, kwaye ngaphandle kokubala ezinye izinto esizibonelelwa ngabambalwa (okanye nanye). Singayithenga nge-899 Euro kwiAmazon (unxibelelwano).
Ithunyelwe nge: Meyi 10 ye2021
Utshintsho lokugqibela: Meyi 10 ye2021
I-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle
IDolby Atmos kunye neDolby TrueHD
Intambo ye-HDMI kunye neadaptha ebonakalayo ibandakanyiwe
Ukwanda kunye nezinye iimveliso ze-Sonos
Iyahambelana ne-AirPlay 2
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Uhlalutyo lwe-Sonos Arc, eyona bar yesandi igcweleyo kwintengiso
Imozulu yeCARROT ifumana amacandelo amatsha kunye neefom zokwenza ngokwezifiso
Uyenza njani into kwaye yintoni ukuqondwa kwesandi se-iPhone